Imithetho yami ye-TouchBar-My, indlela entsha yokwenza ngokwezifiso ibha yeMacBook Pro | Ngivela kwa-mac
Lapho imodeli yokuqala yeMacBook Pro eneTouch Bar iphuma ngo-2016, iningi lonjiniyela ngokushesha laqala ukusebenzisa izinhlelo zabo ukuze lihambisane neTouch Bar. Kamuva kwavela uhlelo, I-BetterTouchTool, ukwenza ngokwezifiso ibha yekhibhodi ye-Apple nezinye izinhlelo zokusebenza ezifanayo kulindeleke ukuthi zivele emakethe.
Lokhu akwenzekanga, noma okungenani ngendlela enkulu. Namuhla Siyazi uhlelo lokusebenza olukuvumela ukuthi wenze ngezifiso i-Touch Bar, imithetho yami ye-Touch-My, noma kunalokho njengoba umakhi esho "Ingxenyekazi yezengezo zohlelo lokusebenza ukwenza kube ngeyakho i-Touch Bar" ngaphezulu kokusabalalisa kwendabuko.
Lokho i-My TouchBar-Imithetho yami ekuthembisayo ukufaka uchungechunge lwezinkinobho ezengeziwe kubha yokuthinta ye-Apple njengoku: ukukhanya, isidlali somculo, umsindo, ikhibhodi nebhethri. Kepha le phrojekthi ayihlali ivaliwe, uma kungenjalo ikuvumela ukuthi wenze ngokwezifiso ibha ngezilungiselelo eziningi.
Ukwenza ngokwezifiso ibha yokuthinta kudinga ukuhlela ifayili lohlelo lwangaphakathi lwe-JSON, ngaphandle kokuthi unamakhono wokuhlela, angicabangi ukuthi unentshisekelo ekukhohliseni. Ngokuphambene nalokho, ukukhetha kwalowo owandulelayo, i-BetterTouchTool, kunikeza isikhombimsebenzisi sokuqhafaza ukuchaza izakhi zebha yokuthinta.
Namuhla iMyTouch-Imithetho yami, kungumsebenzi obanjwe ekhasini IGitHub, y isisesigabeni esincane savela, njengoba kunokuhluleka kwezobuchwepheshe kwezinguqulo eziningi zokuqala, njengokuvula uhlelo lokusebenza ngenkinobho yesibili. Noma kunjalo, ukubonakala kokuqala kuhle futhi ukwenziwa ngokwezifiso kohlelo lokusebenza kusivumela ukubikezela ukuthi kunganikeza okuningi ongakhuluma ngakho, Ngaphandle kokuthi i-Apple ivimbe okuthile entweni ezizayo, ifuna ukuphepha komhlaba kohlelo.
Futhi lolu hlelo lokusebenza luwumthombo ovulekile ngakho-ke, onjiniyela abaningi bangasebenzisa ngokunenzuzo injini yayo ukwenza ngcono imisebenzi namuhla etholakala kubha yomsebenzi.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izaziso » Imithetho yami ye-TouchBar-My, indlela entsha yokwenza ngokwezifiso ibha ku-MacBook Pro
I-Apple ikhipha ngokusemthethweni i-watchOS 4.3.1 ne-tvOS 11.4